Zavatra 10 mendri-piderana ataon'ny olona ary tsy atao (izany hoe fomba fahalalam-pomba) - Blog
mahalala fomba (anarana): fitondran-tena manaja olona sy mihevitra ny hafa.
Mitovy hevitra: fahalalam-pomba, fahalalam-pomba, fanajana, fanajana, fomba, fomba tsara, chivalry, galentry, fahalemem-panahy, fambolena, fahasoavana, fahaiza-mandanjalanja, fahaiza-mandanjalanja, fiheverana, fahaiza-mandanjalanja, fahaiza-misaina, fahaiza-mandanjalanja, diplomasia.
Ao amin'ny 21 feno fahasosorana sy be zotom-postfisiana taonjato, mora ny mieritreritra fa ny fomba sy ny fahalalam-pomba taloha dia namboarina tamin'ny tantara.
Ny fiheverana ny fahalalam-pomba sy ny fitondran-tena am-pitandremana dia tsy dia jerena loatra amin'ny tontolo iray izay toa ny momba ahy sy ny hazakazaka hatrany an-tampony.
Ny olona mahalala fomba dia toa lasa tandindonin-doza!
Na izany aza, somary mampihomehy ihany isika mitsara olona amin'ny fahalalam-pomba (na tsia) amintsika izy ireo.
Fihaonana iray izay ahatsapantsika fa efa niresaka tamim-pahamendrehana na notsaboina tamim-pahanginana isika dia mety hahasosotra antsika mandritra ny fotoana fohy.
Izy io dia mety mandeha lavitra mihitsy aza amin'ny fiatraikany amin'ny toe-pontsika sy ny fomba fikirakirantsika toe-javatra hafa rehefa miseho ny andro na ny herinandro.
Ny zava-misy ireo resa-piainana ireo dia nanakoako lalina tokoa fa ny fahaiza-manao ara-tsosialy ‘malefaka’ toy ny fahalalam-pomba dia tena ilain'ny olombelona tokoa.
Ary hita fa izy ireo…
Mifototra amin'ny fivoaran'ny olombelona izany rehetra izany.
Misy antony marim-pototra fa ireo fitsipiky ny fifandraisana ara-tsosialy ireo dia nivoatra nandritra ny an'arivony taonan'ny zanak'olombelona.
Mamorona vondrona fiaraha-miasa miasa sy miara-miasa izy ireo ary mandray anjara amin'ny fahaveloman'ny karazana.
Ny kolotsaina rehetra, na manao ahoana na manao ahoana ny halavirany sy ny tsy fitovizany amintsika, dia manana ny fomba izay faritan'ny fomban-drazany tsirairay avy. Mety tsy hitovy ny lalàna, fa hisy kosa ny fitsipi-pitondrantena hentitra.
Izany dia milaza zavatra betsaka momba ny maha-ilaina ireo soatoavina ireo amin'ny fitazonana ny fiarahamonina, sa tsy izany?
Noho izany, ny zava-misy dia na mifanaraka amin'ny foto-kevitry ny 'fomba' amin'ny ambaratonga ambony ianao na tsia, hotsaraina amin'izy ireo ianao ary hitsara ny hafa amin'ny fomba mitovy.
Na tiana na tsia, ny fahaizantsika ara-tsosialy, na ny tsy fisian'izy ireo, dia ampahany lehibe amin'ny maha-izy antsika sy ny fahitan'ny hafa antsika.
Kapoka isan-karazany ho an'ny olon-kafa.
Mandritra ny lohahevitry ny fitsarana, teny fampitandremana momba ny fanaovana vinavina sy ny fanamarihana ny fitondran-tenan'ny olona ho tsy mahalala fomba na tsy mahalala fomba…
Aza tonga dia mieritreritra, amin'izao fotoana mifandray izao, fa ny hafa dia manana fomban-drazana mitovy aminao.
Izay heverinao fa fahalalam-pomba, ny hafa dia mety hahita fifangaroana, mahasosotra, na manafintohina mihitsy aza.
Ity misy ohatra manokana: mpampianatra anglisy aho amin'ny mpandahateny amin'ny fiteny hafa izay nahavita ny fotoanany tao amin'ny efitrano fianarana kolontsaina marobe.
Nianarako fa ny fiheverantsika ara-kolontsaina amin'ny fitenenana hoe 'azafady', 'misaotra', ary 'miala tsiny' (matetika rehefa tsy tena tianay akory izany), dia hitan'ireo avy any ampitan-dranomasina miaraka amin'ny hevitra miainga amin'ny tsy finoana ka hatramin'ny fahasosorana.
Ary na izany aza ny tsy fahombiazan'izy ireo mampiasa ireto teny ‘majika’ ireto rehefa miteny anglisy dia hita ho tsy mahalala fomba.
Ka ny zavatra fahalalam-pomba tokony hatao raha ny resaka fifanakalozana eo amin'ny samy kolontsaina dia ny tsy mampihatra ny fahalalantsika fahalalam-pomba amin'ny olona avy amin'ny kolontsaina samihafa.
Ny resaka fahalalam-pomba amin'ny farany dia manjary mifanaja amin'ny fifanajana.
Raha tsy manaja ny hafa ianao dia ny mitazona varavarana misokatra ho an'ny olona iray na mahatadidy anarana dia ny mitafy varavarankely fotsiny ary tsy misy dikany. Mbola ho hita tsy mahalala fomba ianao.
Raha ianao maneho fanajana ny hafa , mety hanao toy izany koa izy ireo ho setrin'izany.
Ny mombamomba ny olona mahalala fomba
Ny fianarana ny fahalalam-pomba, ny fiheverana ny hafa ary ny fahalalam-pomba dia manomboka amin'ny taona voalohan'ny fampandrosoana antsika.
Mety ho hitanao fa mankafy ny hafa ianao izay toa manilika ny fahalalam-pomba amin'ny foto-keviny amin'ny fiezahana kely fotsiny.
Matokia fa tsy ezaka izany. Izy io dia lamina amin'ny fitondran-tena izay nianarana nandritra ny androm-piainany ary tena lalim-paka.
Angamba ianao mahatsapa fa mety ho fanao amin'ny famafana kely ny fanao. Raha ny marina dia heveriko fa azontsika rehetra atao ny manao fampahatsiahivana kely izao ary avy eo ny fomba mety hitondran-tena!
Ka andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo zavatra fanaon'ny olona mahalala fomba sy tsy ataony - tsy misy filaharana manokana.
1. Izy ireo aza mitsara ny hafa
Ka, efa imbetsaka aho no nanonona ny teny hoe 'J' tamin'ity sombin-javatra ity, fa ny mitsara dia zavatra tsy hataon'ny olona mahalala fomba mihitsy.
Impiry ianao no nanapa-kevitra haingana momba ny toetran'ny olom-pantatra vaovao na ny toe-javatra misy azy ary tsy maintsy nanao fihodinana haingana rehefa fantatrao tsara izy ireo?
Tsotra kokoa, ary tsara fanahy kokoa, mba hialana amin'ny faniriana hitsara aloha.
2. Tsy mizara fampahalalana manokana ry zareo
Ny olona tsara fitondran-tena dia manohitra ny faniriana oh-so-human-hizara ny antsipirian'ny akaiky amin'ny fiainany, na ho zava-misy izy ireo na olana fotsiny.
Tsy ho tratranao mihitsy izy ireo miresaka momba ny vola azony, ohatra, ary ny antsipirian'ny hemoridia dia hijanona am-pamindram-po amin'ny toerana misy azy ireo - nakatona tsy ho hitan'ny maso!
3. Tsy miparitaka izy ireo na tsy mihaino resaka mifosa
Ny fahafahany mampahafantatra zava-baovao mahaliana momba ny olom-pantatra na mpiara-miasa dia fomba iray azo antoka azo antoka mba ho isan'ny vahoaka 'in'.
SY nihaino mazoto amin'ny olon-kafa milaza tantara dia midika fa eo amin'ny làlana anatiny ianao, manome fahafaham-po ny mila an'ny olombelona ...
Fa amin'ny fotoana fohy ihany, satria tsy misy matoky fifosana.
Ny olona mahalala fomba dia tsy liana amin'ity fihetsika ratsy ity ary hanongilan-tsofina amin'ny resadresa-poana foana, na manitikitika ny sainy aza.
Izany dia mahatonga azy ireo mpiara-dia mahatoky. Izany no mahatonga azy ireo hitandrina ny sakaizany raha ny hafa kosa mandoa ny vidin'ny fanaovana resadresa-poana rehefa mandao azy ireo ny namany.
Fifandraisana amin'ireo olona tsy mifona velively na miaiky fa diso izy ireo
4. Tsy manosika ny hafa hanaraka ny heviny izy ireo
Ilay feo mahery izay manery hatrany ny fomba fijeriny matetika fa mahabe resaka amin'ny resaka rehetra dia tsy malaza velively.
Ireo hevitra ireo dia avoaka na nangatahina na tsia - matetika tsy.
Ny mariky ny fahalalam-pomba sy ny fahalalam-pomba dia ny misoroka ny fanerena ny eritreriny amin'ny hafa.
aiza i ronda rousey izao
Eny, mazava ho azy, raha angatahina izy ireo dia hizara ny heviny, saingy hisokatra amin'ny hevitra samihafa sy hanana adihevitra voalanjalanja izy ireo.
Tsy hanizingizina mihitsy izy ireo hoe hiova fo amin'ny fisainany ianao.
5. Tsy miborosy olana lehibe izy ireo
Ny olona sasany dia hanao na inona na inona hisorohana ny maha-hafahafa ny resadresaka ifanaovana amin'ny olona iray izay namoy havana vao tsy ela akory izay na ny fiarahan'izy ireo nitafy fotsiny na niaritra trauma hafa manokana.
Ilay manana fomba fanao tsara kosa, etsy ankilany, dia hitady fomba hampiakatra ny raharaha haingana araka izay tratra mba hisorohana ny faharetan-kenatra na fahasosorana satria miandry ilay fijaliana alahelo na famoahana ilay tranga mampivadi-po.
Tsy zavatra mora mihitsy izany, fa tsara kokoa noho izany ny manaiky ny fahasosorana amin'ny fiainan'ny sakaizantsika na mpiara-miasa amintsika fa tsy miraharaha azy. Manaja an'io ny olona mahalala fomba.
6. Maneho fisaorana hatrany izy ireo
Ny fanehoana fankasitrahana amin-kafanam-po amin'ny fihetsika, fanomezana na fandraisana vahiny no lohalaharana amin'ny lisitry ny zavatra ataon'ny olona mahalala fomba.
Tsy ho hitanao izy ireo mandroaka tsipika iray amin'ny alàlan'ny mailaka na amin'ny soratra hoe 'misaotra.'
Tsy hanao ilay fiheverana ihany koa izy ireo fa ny namany na ny havany dia 'hahafantatra' fotsiny fa nahafinaritra izy ireo na nankasitraka ilay fanomezana satria nibitsibitsika teny vitsivitsy izy ireo tamin'io.
Tsia, ny olona mahalala fomba dia hanokana fotoana hanoratana teny vitsivitsy amin'ny karatra iray ary handefasana azy amin'ny fomba taloha amin'ny alàlan'ny mailaka. Sa hanao izy ireo milaza misaotra amin'ny fomba hafa misy dikany .
Raha ny tena izy dia tsy mila fotoana firy hanaovana izany fa tena avy am-po kokoa amin'ny fanehoana fankasitrahana marina. Ny tahirinao dia hiakatra be eo imason'ny mpandray, azo antoka!
7. Hametrahan'izy ireo toerana hafa ny hafa
Rehefa miatrika fotoana mety hahasadaikatra ianao, ny olona mahalala fomba dia hahita fomba malefaka sy mety foana hanaparitahana izay henjana, saro-kenatra na ahiahy amin'ny hafa.
Hiezaka mafy izy ireo hampihena ny tsy fahazoana aina mahazo ny hafa na inona na inona antony.
Mila mangoraka ianao mba hahitanao ny toe-javatra toy izany ary ity dia toetra iray mahazatra an'ny olona mahalala fomba.
8. Mihaino tsara izy ireo
Tsy ho tratranao ny olona mahalala fomba mibanjina ny famantaranandrony raha miresaka aminy ianao na, mbola ratsy kokoa aza, mijery eo an-tsorokao raha misy olona liana kokoa na ‘mahasoa’ niditra tao amin'ilay efitrano.
Ary tsy ho hitanao ny mason'izy ireo misolelaka amin'ny resaka afovoany. Ary raha ny mahazatra manamarina ny telefaonin'izy ireo ho an'ny fanavaozana ny media sosialy raha miresaka ianao? Sanatria!
Ny olona mahalala fomba dia mahay ‘mihaino mavitrika.’
Tsy vitan'ny hoe mampiseho ny fifantohany feno amin'ny fihazonana fifandraisana matetika amin'ny maso , handohalika na hitsiky ihany koa izy ireo ary hilaza ny fanekena hafahafa, noho izany dia matoky tena ny mpandahateny fa hanohy hiteny.
Raha tsy mampihetsi-po azy ireo ny lohahevitra dia tsy ho fantatrao izany, satria mahay koa izy ireo mamily ny resaka amin'ny fomba malefaka ka tsy ho hitanao akory!
9. Avelany hiresaka momba anao izy ireo
Ny fanitarana ny teknika fihainoana mavitrika dia ny fahaizan'ny olona mahalala fomba mametraka fanontaniana manan-tsaina sy mifandraika aminao.
Aleo atrehana, mazàna io no lohahevitra tianay indrindra.
Raha avelan'ny olona hiresaka mandritra ny taona maro momba ny zava-bitanao ianao na ny fisondrotana sy ny fihena amin'ny fiainanao ary toa liana tokoa, dia resaka mahafinaritra izany, sa tsy izany?
Rehefa mizotra amin'ny famirapiratan'ny fahafinaretana tamin'ny fifandraisana tamin'io olona faran'izay tsara io ianao dia ho tsapanao fa tsy mahalala na inona na inona momba azy ireo ianao raha naheno ny tantaram-piainanao izy ireo.
10. Tsy hanadino ny anaranao izy ireo
Mazava izany. Fantatsika rehetra fa tsara ny miresaka amin'ny hafa amin'ny anarany (ny marina!).
Ny sasany amintsika dia manome tsiny ny fahatsiarovana tsy dia tsara loatra noho ny tsy fahombiazantsika nanao an'io, saingy, raha ny marina, tsy dia sarotra ny mijery manokana rehefa misy ny fampidirana.
Tsy maninona koa ny manontany indray raha tsy nahatratra ilay anarana ianao tamin'ny voalohany. Aleo izany toy izay ho voataona rehefa tsy maintsy mampahafantatra olon-kafa an'io olona io ianao fa tsy manana famantarana.
Mety ho tsikaritrareo fa ny olona mahalala fomba tsy an-kanavaka dia hamerina aminao ny anaranao mandritra ny resaka.
Tsy tetika tokony hampiasaina be loatra satria mety hahasosotra, fa fitaovana ilaina handentehana anarana ao anaty fitadidinao na izany aza.
Maimaimpoana ny zavatra tsara indrindra amin'ny fiainana.
Misy ohabolana Sloveniana tena mety indrindra manaraka ny andalana 'tsy misy dikany ny fahalalam-pomba fa mamokatra be.'
Na dia tsy mandany vola aza ny fahalalam-pomba, dia afaka manisy fiovana be amin'ny fiheveran'ny hafa anao izy ireo.
Amin'ny tontolon'ny asa aman-draharaha, izany dia mandeha ihany koa ho an'ny fikambanana izay soloanao tena, ka ny valisoa avy amin'ny fahalalam-pomba dia mety ho matihanina na ho an'ny tena manokana.
Lavitra ny hevitra efa lany andro.
Amin'izao fotoana mampisara-bazana izao dia tsy zava-dehibe velively ny fahalalam-pomba, ny fahalalam-pomba ary ireo teny rehetra mitovy hevitra etsy ambony ireo.
Nolazaiko tetsy ambony ny fomba fihaonana amin'ny olona tsy mahalala fomba ary ny tsy fahalalam-pomba dia mety hamela anao ho maratra.
Ahoana ny amin'ny fandinihana izay mahatonga ny fifanakalozana amin'ny mpiara-belona amintsika tsy hay hadinoina amin'ny fomba tsara?
Eny, saika foana ny fahalalam-pomba, ny fiheverana, ny fifanajana, ny fieritreretana - afaka nandeha foana aho…
Mioty ny tombony azo avy amin'ny fahalalam-pomba.
Miankina amin'ny fanarahana ilay torohevitra tsy misy fotony izany hoe 'ataovy amin'ny hafa ny olona araka izay tianao hataony aminao.'
Ary ny zavatra lehibe momba ny fahalalam-pomba sy ny fahalalam-pomba dia ny hafa mety hahalala fomba kokoa sy hanaja azy ho valiny, ka tena mijinja izay nafafinao ianao.
Avelako ho an'i Roy T. Bennett, mpanoratra mandrisika ny teny farany Ilay hazavana ao am-po :
Raiso ny fahalalam-pomba sy ny hatsaram-panahy ny tsirairay, tsy hoe satria tsara izy ireo, fa satria ianao.
ny fomba famelana ny lasanao taloha ary handrosoana
manisy sonia bandy te-hiara-matory aminao fotsiny
ahoana ny fomba tsy hiresahana mihitsy
mankafy ireo zavatra tsotra amin'ny fiainana
ahoana no ahafahako mamerina ny fiainako amin'ny laoniny
inona no hatao rehefa irery sy mankaleo ianao